चीन YF-HY-2 11 दराज गिलास निर्माता र आपूर्तिकर्ता बिना Yifan
आजकल, भ्यानिटी टेबलले मूल्यको बारेमा उच्च मूल्यको फर्निचर वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कसैले पनि एक प्राप्त गर्न रोक्दैन यदि तपाईं मेकअप भ्यानिटी खर्च गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने। घटनामा तपाई हाल व्यर्थको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई दुई विकल्पहरू संकेत गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ।
आजकल, भ्यानिटी टेबलले मूल्यको बारेमा उच्च मूल्यको फर्निचर वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कसैले पनि एक प्राप्त गर्न रोक्दैन यदि तपाईं मेकअप भ्यानिटी खर्च गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने। घटनामा तपाई हाल व्यर्थको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई दुई विकल्पहरू संकेत गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। भित्ता ऐना खरीद गर्नुहोस् र सिट सेट गर्नुहोस् र साथै एक सुरुचिपूर्ण र आरामदायी भोजन तालिका। यो तपाईंको कल्पना भ्यानिरी को बारे मा अन्तिम छ। दोस्रो, सीमित भण्डारण भएको मेकअप रिमूभर खरीद गर्नुहोस् वा केही प्लास्टिक कन्टेनरहरू किन्नुहोस् र यस व्यर्थको साथ सँगै यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईंको सानो अपार्टमेन्टमा ठाउँ समस्याहरूको सामना गर्न छ? के तपाईले कहिले आफ्नै एउटा कुनामा खोज्नु भएको छ? के तपाईंलाई तपाईंको सौन्दर्य प्रसाधनहरू, अत्तरहरू, र मेकअप गियर भण्डारण गर्न थप ठाउँ चाहिन्छ? तपाईं एक महिला हुनुहुन्छ र तपाईं हरेक दिन ठूलो हेर्न चाहनुहुन्छ, र हामी तपाईंलाई बुझ्दछौं। त्यसैले हामीसँग तपाईंले खोजिरहनु भएको उत्तर छ! हाम्रो कुनाको मेकअप भ्यानिटी सेट तपाईंको अनुहारको प्रत्येक कोणको अन्वेषण गर्न ट्रि-गुना स्थायी दर्पणको साथ आउँदछ। तपाइँको सौन्दर्य प्रसाधनहरू फेरि "कहाँ भण्डार गर्ने" बारे कहिल्यै नसोच्नुहोस्। यो ११ ड्रयरहरूको साथ आउँदछ जुन तपाईंलाई आवश्यक भन्दा बढी ठाउँ प्रस्ताव गर्दछ।
सेतो काठले बनेको यो कुनै पनि कोठामा फिट हुनेछ किनकि हामी सबैलाई थाहा छ, सेतो केहि पनि संग जान्छ। केवल प्रीमियम सामग्रीबाट डिजाइन गरिएको।
हामीले तपाईको बारेमा सिकायौं, तपाईं एक मानिस भए पनि! तपाईं यसलाई आफ्नो पत्नी, प्रेमिका वा छोरीका लागि किन्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, यो उत्तम आश्चर्य हो!
पूर्ण हेराईका लागि कडा ड्रअरमा तपाईंको ठाँउको ट्याबलेटटप राख्नुहोस्। Soft सफ्ट-क्लोजर ड्रॉरहरू (२x) सुविधाहरू जुन हाम्रो क्रिस्टल लक्स ड्रअर नबसँग हाइलाइट गरिएका छन्
आकार: १ *० * *० * cm० सेमी
ड्रयर आकार: * 43 * १.6..6 * cm० सेमी
बेस आयामहरूको साथ दर्पण। Mir.75ror "W x १२.75 32 'D x 32.5" H
बेस आयाम बिना दर्पण .2 43.२5 "W x २.7575" D x 31.5 "H
रंग: कालो, सेतो, गुलाबी गुलाब (हाम्रो हस्ताक्षर ग्लोसी सेतो, प्रो कालो, शिममेरी सिल्वर, शैम्पेन गोल्ड, र गुलाब गोल्ड प्रिमियम फिनिशमा उपलब्ध)
हामी आकार र र ofको OEM समर्थन गर्दछौं, कृपया ग्राहक सेवाको साथ कुरा गर्नुहोस्
हलिउड ग्लैमर सौंदर्य यसको सरल परिष्कृत संग कि अनगिनत मेकअप प्रेमीहरु, पेशेवरहरु र सौन्दर्य ब्लॉगरहरु प्रेम मा पर्दछ। हजारौं आनन्दित भानिटिस्टासमा सम्मिलित हुनुहोस् र तपाईंको प्रत्येक दिन चमक दिनुहोस्!
अघिल्लो: YF-HY-1 १ draw दराज
अर्को: YF-HY-33दराज
क्रिस्टल हलिउड ग्लो वैनिटी
हलिउड क्लासिक भ्यानिटी मिरर
हलिउड मेकअप भ्यानिटी अष्ट्रेलिया
हलिउड भ्यानिटी मिरर लाइट्सको साथ
हलिउड भ्यानिटी स्टेशन
हलिउड भ्यानिटी टेबल सेट
आधुनिक शैली हलिवुड भ्यानिटी मेकअप मिररहरू